Bitcoin dị ka | Exonumia
About Exonumia Ntụgharị asụsụ
Nabata na Bitcoin, ndị bịara ọhụrụ!
Kọwaa Bitcoin ka m dị ise
Bitcoin dị ka
Bitcoin v0.1 wepụtara
Re: Bitcoin v0.1 wepụtara
Ngwa Translation Projects
# Bitcoin dị ka
nke Oleg Andreev 2017/12/10open in new window
Bitcoin dị ka ego nkịtị: ọ naghị agbanwe agbanwe ma ọ bụ gị na-ahụ maka ijikwa ya. Ọ bụrụ na ị tufuo obere akpa gị, ego gị ga-atụfu. Ị nwere ike ịnye onye bitcoins ka ọ jide gị, ma ọ ga-adị ka ụlọ akụ ọ bụla: ị ga-atụkwasị ha obi na ha agaghị agbanahụ ego gị.
**Bitcoin adịghị ka ego nkịtị: *** ị nwere ike ịchekwa ihe ịchọrọ ma ọ gaghị ewe ohere ọ bụla. Ị nwere ike izipu ya na waya onye ọ bụla. Ọ gaghị ekwe omume ịgha ụgha. Ị nweghị ike ịnye ya n'otu nkeji: iji kwenye n'ezie na azụmahịa ahụ emewo, ị ga-echere 10-15 nkeji maka ihe akaebe cryptographic nke netwọk ga-emepụta.
Bitcoin dị ka ọla edo: enweghị ike imepụta ya masịrị ya, enwere oke ya na ego a gbasasịa n'oge na-aga n'ihu (ọtụtụ oge). Iji nweta ụfọdụ bitcoins mmadụ kwesịrị inye gị ha, ma ọ bụ ị ga- * nke m * ha. Dị ka ọla edo, Bitcoin na-egbuke egbuke: ọ na-adọta ndị mmadụ na injinia mara mma, asụsụ mmemme nkwekọrịta arụnyere, ihe mkpali amamihe, na nkwa nnwere onwe nke nnwere onwe pụọ na mmanye.
Bitcoin adịghị ka ọla edo: A na-edozi nnyefe nke Bitcoin kpamkpam site na Ngwuputa Ngwuputa (naanị ọtụtụ bitcoins ka a na-emepụta kwa elekere). Ị nwere nkwa na ọ dịghị onye ga-ahụ na mberede ugwu bitgold ma ọ bụ m ya na asteroids. N'adịghị ka ọla edo, a na-edozi ihe isi ike Bitcoin ka ọ bụrụ mgbalị ndị a na-egwupụta akụ iji dobe usoro nhazi. Ị nwere ike igwu ọla edo niile n'otu ụbọchị, mana ọ gaghị ekwe omume na Bitcoin n'agbanyeghị ngwa ngwa kọmputa ga-adị. Mgbalị ndị na-egwupụta akụ na-eto eto nwere ike ịgbatị oge ntakịrị (netwọk na-edozi ihe isi ike maka ịmepụta 6 blocks kwa elekere, ma ọ bụrụ na netwọk na-eto eto mgbe niile, ọ nwere ike ịmepụta 7-8 blocks kwa elekere).
Bitcoin dị ka ụlọ akụ: enwere kọmputa, ọdụ data na azụmahịa. Ebe nchekwa data na-echekwa akụkọ ihe mere eme niile nke ịkwụ ụgwọ mbata na ọpụpụ: onye zigara onye. Ihe niile bụ dijitalụ. Enweghị oghere nwere ọla edo ma ọ bụ igbe nkwụnye ego nkeonwe, naanị idebe akwụkwọ n'otu “ledger”.
Bitcoin adịghị ka ụlọ akụ: onye ọ bụla nwere ike ịchọpụta na nchekwa data ha nwere otu akwụkwọ ndekọ aha dị ka nke onye ọ bụla ọzọ. Enweghị onye njikwa na-ahụ maka imelite akwụkwọ ndekọ ego na ịhụ na emebighị ya. Onye ọ bụla nwere ike ịnwe ọtụtụ akaụntụ dịka masịrị ya na akaụntụ niile enweghị aha (ọ gwụla ma mmadụ kpugheere ya n'onwe ya). Ledger anaghị echekwa aha, naanị itule na nọmba akaụntụ. Ọ nweghị ohere ịnweta “obere ebe nchekwa” mgbe ụlọ akụ gbazinye ego karịa ka o nwere n'ezie. N'ezie, ọ dịghị ụgwọ na bitcoin ledge: ma ị nwere ego na adreesị gị ma ọ bụ nke gị zuru oke, ma ọ bụ na ị nweghị ma ị nweghị ike iji ya ma ọlị. Ọzọkwa, Bitcoin na-enye ohere iji "nkwekọrịta" kpọchie ego: mgbagwoju anya cryptographic e mere iji gbasaa mkpebi n'etiti ọtụtụ mmadụ ma ọ bụ n'oge.
Bitcoin dị ka Monopoly ego: mkpụrụ ego bụ ihe nrịbama nke na-abụghị uru ọ bụla. Ndị mmadụ ji ha kpọrọ ihe n'ihi na ha na-ahọrọ igwu egwuregwu ahụ. N'ezie, otu ihe ahụ dịkwa maka ọla edo ma ọ bụ ego ọ bụla ọzọ.
Bitcoin adịghị ka ego monopoly: enwere obere ihe nrịbama na ọ nweghị onye nwere ike mebie ha. Nke a na-eme ka ha bụrụ ezigbo onye ndoro-ndoro maka mkpokọta ụwa ama ama dị ka mkpụrụ ego ọla edo ma ọ bụ ọlaọcha.
Bitcoin dị ka Git: na Git (sistemụ njikwa ụdị ekesa) ka ahaziri mgbanwe gị niile n'agbụ nke hashes cryptographic chebere. Ọ bụrụ na ị tụkwasịrị obi ọhụrụ hash, ị nwere ike nweta ozi niile gara aga (ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke ya) site na isi mmalite ọ bụla wee chọpụta na ọ bụ ihe ị tụrụ anya ya. N'otu aka ahụ, na Bitcoin, a na-ahazi azụmahịa niile n'agbụ (* blockchain *) ma ozugbo kwadoro, n'agbanyeghị ebe echekwara ha, ị nwere ike ịtụkwasị obi mgbe niile nke blockchain site na ịlele agbụ nke hashes na-ejikọta na hash ị na-amabu. ntụkwasị obi. Nke a na-enyere aka nchekwa ekesa na mfe nlele iguzosi ike n'ezi ihe.
Bitcoin adịghị ka Git: n'ụzọ onye ọ bụla na-agba mbọ ịrụ ọrụ n'otu alaka. Na Git onye ọ bụla nwere ike ịnwe ọtụtụ alaka na ndụdụ ma jikọta ha ogologo ụbọchị dum. Na Bitcoin enweghị ike "jikọta" ndụdụ. Blockchain bụ n'ezie osisi nke akụkọ ihe mere eme azụmahịa, ma a na-enwekarị otu nnukwu alaka ụlọ ọrụ (nke nwere uru) na ụfọdụ alaka ụlọ ọrụ mberede (ọ bụghị ihe karịrị otu na abụọ blocks ogologo) nke na-enweghị uru ọ bụla. Na ọdịnaya Git dị mkpa karịa alaka, na Bitcoin nkwenye dị mkpa karịa ọdịnaya.
Bitcoin dị ka Bittorrent: netwọk na-agbasasị kpamkpam, ọ nweghị otu "mint" ma ọ bụ "ụlọ akụ". Ihe mgbochi ahụ dị ka otu faịlụ na bittorrent: enyocha nke ọma ma kesaa n'ofe ọtụtụ kọmputa. Onye ọ bụla so na ya, gụnyere ndị na-egwuputa ihe na-eme ihe n'otu ebe. Ọ bụrụ na otu akụkụ nke netwọk ahụ kwụsịrị, azụmahịa nwere ike ịgafe n'akụkụ ndị ọzọ. Ọbụlagodi na netwọkụ ahụ dum na-agbada, a ka na-echekwa ozi gbasara azụmahịa n'ọtụtụ puku kọmputa ndị nweere onwe ha ma ọ nweghị ego onye ọ bụla na-efunahụ ya. Mgbe ndị mmadụ na-ejikọta ibe ha ọzọ, ha nwere ike ịga n'ihu na-eziga azụmahịa dịka ọ dịghị ihe merenụ. Ma Bitcoin na Bittorrent nwere ike ịlanarị agha nuklia n'ihi na ozi anaghị aghọ redioactive na enwere ike ịmegharị ya n'enweghị nsogbu.
Bitcoin adịghị ka Bittorrent: kama ọtụtụ "faịlụ" nọọrọ onwe ya, enwere otu faịlụ na-etolite mgbe niile: blockchain. Ọzọkwa, ndị kacha mkpa sonyere: ndị na-egwuputa ihe na-enweta ụgwọ ọrụ maka ọrụ ha na ezigbo ego.
Bitcoin dị ka nnwere onwe ikwu okwu: azụmahịa ọ bụla bụ ozi ọha dị mkpirikpi nke enwere ike ịkpọ n'agbanyeghị ebe ma ọ bụ otu. Ọ bụrụ na ụfọdụ ndị na-egwuputa ihe na-anụ ya, ha ga-agbakwunye ya na blockchain na ozi ahụ ga-adị ruo mgbe ebighị ebi na akụkọ ihe mere eme. Onye ọ bụla ga-ahụ ya ma ọ dịghị onye ga-enwe ike ihichapụ ya.
Bitcoin adịghị ka nnwere onwe ikwu okwu: ikwu ihe na-abịa na ọnụ ahịa. Azụmahịa na-akpali mkpụrụ ego ị ga-eji malite. Ya mere, ọ bụghị onye ọ bụla moron ka a na-ekwe ka tie mkpu, kama ọ bụ naanị ndị nwere uru iji nweta ụfọdụ mkpụrụ ego na mbụ. Ọzọkwa, ndị na-egwuputa ihe nwere ike jụ azụmahịa ma ọ bụrụ na ọ bụ spammy ma ọ bụ enweghị ụgwọ zuru oke. Ya mere, ọ dịghị onye na-enye onye ọ bụla nnwere onwe dị ka "na biya", ma onye ọ bụla na-agbalị ime nkwado na afọ ofufo.
Bitcoin dị ka nkwekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya: ọ bụ omenala dị ọcha. Ọ na-arụ ọrụ dị ka ego ma ọ bụrụhaala na ndị mmadụ na-emeso ya dị ka nke a ma nwee obi ike ijide ya ma kwanyere iwu ya ùgwù. Teknụzụ chọrọ naanị obere ihe iji nye pọmpụ dị mkpa maka nkwekọrịta ahụ.
Bitcoin adịghị ka nkwekọrịta mmekọrịta ọha na eze: ọ bụghị ụdị nkwekọrịta ha na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ. Ọ naghị agbanwe agbanwe, ọ bụghịkwa ụfọdụ ndị ọchịchị nyere ya iwu. Ọ bụ usoro iwu na-enweghị ike ịgbanwe nke onye ọ bụla na-ahọrọ itinye onwe ya n'ọrụ, ya mere na-agbakwụnye n'otu nkwenye.
Bitcoin dị ka ego ịntanetị anwansi: ọ bụ naanị.
Melite ọdịnaya open in new window
Emelitere ikpeazụ: 13/5/2022, 20:44:16
← Kọwaa Bitcoin ka m dị ise Bitcoin Is Like Sports →
Ndị ntụgharị asụsụ